Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanambarana
Holafitry ny mpanao gazety
Izahay mpikamban’ny Holafitry ny Mpanao Gazety voafidy teto amin’ny faritanin’Antananarivo dia manamafy sy manantitra fa tsy ara-dalàna sy tsy manaraka ny lalànan’ny serasera sy ny fifandraisana ny fananganan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana (MCRI) ny Vaomiera manokana mikarakara ny karapanondron’ny mpanao gazety. Aminay, ezahina hatao kara-pifidianana ho amin’ny fifidianana birao vaovao fotsiny ihany izany.
Voatondron’ny andininy faha-55 amin’ilay fehezan-dalàna mifehy ny serasera sy ny fampahalalam-baovao fa andraikitra ny Holafitry ny Mpanao gazety ny mikarakara izany karapanondron’ny mpanao gazety izany.
Noho izany, tsy tompon’andraikitra mivantana na ankolaka amin’io fikarakarana kara-pifidianana ataon’ny Vaomiera natsangan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny andrim-panjakana io izahay mpikamban’ny Holafitry ny Mpanao Gazety voafidy teto amin’ny faritanin’Antananarivo.
Tsy miditra ao anatin’ny « Comité de suivi et contrôle » natsangan’ny minisitera koa izahay, araka ny fanazavana eo ambony.
Malalaka amin’ny fanapahan-keviny amin’izay fepetra raisiny avy kosa anefa ny mpanao gazety tsirairay avy eto amin’ny faritanin’Antananarivo sy ireo tompon’orinasa fanaovan-gazety na haino aman-jery.
Natao izao fanambarana izao mba hanamafisana ny hevitray sy hialan’ny ahiahy.
Androany, 17 janoary 2018
Ny filoha lefitra ny OJM faritanin’Antananarivo
Ny mpanolotsaina OJM faritanin’Antananarivo